Azon’ny Pampulha Ensemble, Mpisava Làlana An’i Brasilia, Ny Satan’ny Lova iombonana Manerantanin’i UNESCO · Global Voices teny Malagasy
Azon'ny Pampulha Ensemble, Mpisava Làlana An'i Brasilia, Ny Satan'ny Lova iombonana Manerantanin'i UNESCO
Voadika ny 01 Aogositra 2016 4:05 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, नेपाली, English
Fiangonan'i Pampulha. Sary: Flickr / Ludmila Tavares
Tamin'ny 17 Jolay, neken'ny Fikambanana misahana ny Fanabeazana, ny Siansa ary ny Kolontsaina ao amin'ny Firenena Mikambana (UNESCO) hanana ny satan'ny Lova iombonana Manerantany ny Pampulha Moderne Ensemble ao Brezila, izay any Belo Horizonte renivohitry ny fanjakan'i Minas Gerais. Ahitana trano lehibe efatra ny Ensemble : ny Casino ( fantatra ankehitriny amin'ny hoe Tranom-bakoka Fitahirizana sy Fampirantiana ny Asa kanton'i Pampulha), ny efitra fandihizana, ny Fiangonan'i São Francisco de Assis, ary ny Tennis Yacht Club, samy endrika nomen'ilay Brezliana ngezalahy mpanao maritrano Moderina, Oscar Niemeyer, tamin'ny fiandohan'ny taona 1940.
Nanomboka tamin'ny 1996 i Pampulha no nirotsaka ho fidiana tany amin'ny UNESCO, ho toerana iray amin'ireo lisitry ny toerana marobe mendrika hatao lova iombonana. Na izany aza, ny taona 2012 ny governemantan'ni Belo Horizonte vao nampitombo avo roa heny ny ezaka nataony, izay nahazoana vokatra efatra taona aty aoriana – ary noho ny antony mahasoa. Ambaran'ny pejin'ny haban-tranonkalan'ny UNESCO ny anton'ny nandraisany fanapahankevitra hanome ilay toerana faha-20 any Brezila ny satan'ny lova iombonana manerantany :
Ahitana endrika manaitra izay mitrandraka ny famolampolahana ny vato sy simenitra voasesika vy amin'ny fampivadiana ny maritrano, ny endriky ny zaridaina, ny sokitra sy ny hosodoko ao aminà tontolo iray voarindra ilay Ensemble. Taratry ny fomba amam-panao any an-toerana, ny toetrandro sy ny tontolo voajanaharin'i Brezila voafehy ao anatin'ny fitsipiky ny maritrano moderina izany.
Endrika tsy manam-paharoa ny endriky ny Pampulha Ensemble, hita amin'ny sary etsy ambony, noho ireo taila manga manodidina azy nataon'ilay Breziliana mpandoko fanta-daza, Cândido Portinari. Tsy nanaraka ny fenitry ny maritrano ny fiangonana São Francisco de Assis, voaorina tamin'ny 1943 niaraka tamin'ny fanampian'ilay injeniera sady poeta Joaquim Cardoso, noho ny ivelany mahavalalanina sy ireo valintafony midongodongona.
Nahatonga resabe teo amin'ny fiarahamonina ilay fiolakolahana mahavariana tamin'ny fotoan'andro. I Niemeyer, markista mandra-pahafatiny, no voalaza fa nanome endrika ilay fiangonana mba hanehoana ny mariky ny kaominisma ( na dia tsy mbola nilaza izany mihitsy aza izy ).
Raha toa ka niteniteny ny endrik'ilay trano, ny lakolosin'ilay fiangonana kosa dia nangina hatramin'ny 1959. Araka ny nosoratan'ny mpanoratra Marcelo Cedro tao amina gazety momba an'i Kubicheck sy ny fiangonana Pampulha dia ny tsy fisian'ny tanambokovoko no nahatonga ny Dom Cabral, Arsevekan'i Belo Horizonte, hiteny hoe ” raha tsy eo ny tanambokovoko dia toy ny hoe te-hihady ny tany hikatsaka haizina ilay mivoitra “
Mbola notohizan'i Cedro fa angamba noho ireo “fahotany” – tsy noho ny endriny hita maso ihany, fa noho ny fanindrahindràna ny Ensemble ihany koa, izay misy ny casino, no antony tsy nanokanana ny fiangonana izay ela izay.
Na dia noheverina fa nisintaka tamin'ny fiangonana Katolika aza izy io, dia nataon'ny governemanta tao an-toerana hoe tsangambato fahatsiarovana sy nekeny hanana ny satan'ny Lova iombonana ara-tantara sy ara-javakanto izy io.
Tany am-boalohany dia noheverina ho foiben'ny Pampulha Ensemble ny Casino (angamba noho ny fitiavan'i Juscelino Kubitschek miloka). Indray alina no namolavolavolan'i Niemeyer azy, ary naorina tamin'ny 1942, vetivety foana dia lasa toerana fandehanan'ny manan-katao any Belo Horizonte ilay toerana, sady nahasarika ireo mpizahatany avy lavitra.
Ankoatry ny filokàna, dia hankafy mozika mivantana sy ny sehatra fandihizana, ary hatramin'ny fampisehoana toy ny hakingàna ihany koa no nitsidihan'ny olona ilay toerana. Tsy naharitra ela ny naha-Casino azy, na izany aza, noho ilay didim-panjakàna mandràra ny filokàna navoakan'ny filoha tamin'ny 1946. Niandry iraika ambin'ny folo taona hafa taty aoriana, ny taona 1957, vao navadika ho tranombakoka fitehirizana sy fampirantiana ny asa kanton'i Pampulha izany. Ankehitriny, dia ahitàna angonà singanà asakanto amin'izao fotoana izao miisa 1.600 ilay tranombakoka.
Ny Casino / Tranombakoka Fitehirizana sy Fampirantiana ny asa Kanto ao amin'ny Pampulha Essemble, any Belo Horizonte. Flickr – Sary: Rodrigo Denúbila
Tany am-boalohany, tamin'ny 1943 dia niorina teny ambonina nosy voatrolombelona ny “Casa do Baile” (efitra fandihizana), toerana fanaovana lanonana niaraka taminà trano fisakafoanana sy efitra fandihizana. Vokatry ny fanakatonana ny casino teo akaiky teo izay nahatonga ny fientanentanan'ny Ensemble, dia nikatona ny Efitra fandihizana ny 1948 ary efa matetika nampiasaina mandra-pahatongany ho Foibe Fakan-tàhaka ho an'ny Maritrano, ny Fanatsaràna ny tontolo an-drenivohitra ary ny Fanomezana Endrika tamin'ny 2002.
(Efitra fandihizana) Flickr – Sary: David RSG
Miendrika sambo vonona hiditra anaty rano ny Tennis Yacht Club ( Golf Yacht Club fahiny ) izay naorina tamin'ny 1942, ary miavaka amin'ireo trano hafa amin'ny tsy fisian'ny fiolakolahana. Ny anto-pisian'io fotodrafitrasa io dia ho toerana fialantsasatra sy fialamboly ho an'ny fianakaviana, ankoatry ny maha-fanaovana lanonana manaraka lohahevitra azy.
Tennis Yacht Club. Toerana ofisialy
Pampulha, Fiandohan'i Brasília
Oscar Niemeyer, izay maty tamin'ny 2012 teo amin'ny faha 104 taonany dia nalaza tamin'ny fiarahana namolavola ny endriky ny renivohitr'i Brezila, Brasília, tamin'ny tapaky ny taona 1950. Na mety ho fanta-daza manerana izao tontolo izao aza ny Pampulha Ensemble ankehitriny noho ny nanandratan'ny UNESCO azy, ny zavatra bitika tokony ho fantatra dia ny hoe ” Pampulha no fiandohan'i Brasília”, araka ny filazan'i Niemeyer izy tenany. Mba hahafantarana bebe kokoa ny tian'io fehezanteny io ho lazaina, dia tsy maintsy iverenana ny taona 1940, raha tsy izany dia ny faramparan'ny andian-taona 1800.
Tamin'ny 1897, dia vao sivy taona no naha-Repoblika an’ i Brezila, ary tsy hoe niara-niasa akaiky tamin'ny fitrandrahana ny harena an-kibon'ny tany sy ny fitondran'andriana fotsiny ny renivohitry ny fanjakan'i Minas Gerais teo aloha, Ouro Preto, fa nampisy tsirim-panantenana kely ho an'ny fivelarana azo iainana ihany koa. Izany no nilàna ny fanorenana sy ny fanokanana ny iray amin'ireo tanàna manara-drafitra voalohany tany Brezila, Belo Horizonte, fantatra tamin'ny hoe Cidade de Minas tamin'izany fotoana izany.
Efapolo taona aty aoriana teo ho eo, tamin'ny 1940, dia nanapa-kevitra ny hamorona zana-paritra any amin'ny faritra tsy misy mipetraka any avaratry ny tanàna ny ben'ny tanànan'i Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek. Ny eritreritra dia ny hahitàna làlana hiatrehana ny fitombon'ny mponina, izay, mampihomehy, tsy niomanan'ilay tanàna manara-drafitra.
Ho amin'io asa io, dia naka ilay anarana malaza iray tamin'ny tontolon'ny mpanao maritrano i Oscar Niemeyer, 33 taona, mba hamolavola ny endriky ny Pampulha Modern Ensemble. Io no tetikasa voalohany nataon'ilay tanora mpanao maritrano samirery ary lasa fanainga sy mpialoha làlana ny famoronana an'i Brasilia. Tamin'ny 1956, rehefa lasa Filoha faha 21-n'i Brezila ilay ben'ny tananan'i Belo Horizonte teo aloha, dia fantany izay antsoina rehefa hafindra avy any Rio de Janiero ho any amin'ny toerana afovoany kokoa ny renivohitry ny firenena satria efa nanomboka nitatra niankandrefana i Brezila. ( Ilay hevitra dia efa hatramin'ny taona 1763. )
Noho ny fahombiazan'ny Pampulha, dia fantatry ny Filoha Kubitschek ( antsoina ihany koa hoe Rain'i Brezila Moderina) fa afaka miantehitra amin'i Niemayer izy, tsy noho ny fomba fijeriny amin'ny fampidirana ny natiora amin'ny asa kantony ihany, izay nilazàn'i Niemeyer hoe :
Tsy ny zoro mahitsy, na ny tsipika mahitsy, na mafy, tsy azo folahana, noforonin'ny olona no manintona ahy. Fa izay manintona ahy dia ny fahalalahana sy ny bilobiloka mahafinaritra, ny fidongodongon'ny tendrombohitra hitako any amin'ny fireneko, ny fiolakolaky ny làlan'ny reniranony, ny onjan-dranomasina, ny vatan'ireo vehivavy maha-te-ho tia. Midongodongona no nanaovana izao tontolo izao, ny tontolo midongodongon'i Einstein.
Tsy mbola hitan'i Juscelino Kubitschek, sy i Oscar Niemeyer, mihitsy izay tao amin'ilay faritry ny tanànany vaovao nitarina — famerenana ny fahombiazana niarahan'ireo lehilahy ireo folo taona mahery lasa ao amin'ny renivohitra vaovaon'ny firenena— fa izay mety ho ao raha ny marimarina kokoa. Indrisy, maty tamin'ny lozam-piarakodia i Kubitschek tamin'ny 1976 ary tsy nahita ny fahatongavan'ilay Belo Horizonte nofinofiny ho lasa lova iombonana manerantany. Pampulha Ensemble sy Brasília— tetikasany roa goavana — mbola mitoetra, na izany aza, tahaka ny maritrano tsy tontan'ny ela rehetra an'ny lehiben'ny mpanao maritrano.
Raha hihaino ny tantaran'ny Pampulha Ensemble tantarain'i Niemeyer mivantana, tadidio ny mijery ity horonantsary fohy, 23 minitra (amin'ny teny Portiogey) ity, mitondra ny lohateny hoe “Pampulha—O Marco,” notantànan'i Moacir de Oliveira ity.